Iwu nke Saint Charbel - WRSP
Iwu nke Saint Charbel
NTỤKWỌ NKE SAINT CHARBEL / MARIAN EKWERE ỤLỌ NCHE
1950 (May 16): William Kamm mụrụ na Cologne, Germany.
1953: Ezinụlọ Kamm kwagara Australia.
1968 (Eprel 14): Kamm nwetara ahụmịhe mbụ ya n'ihe omimi dịka ọhụụ na nchọta na Katidral St Francis Xavier na Wollongong, New South Wales.
1972/1973: Kamm guzobere Marian Work of Atonement (MWOA).
1982 (March 7): Kamm natara ozi nzuzo mbụ ya site na Virgin Mary.
1982 (July 16): Kamm natara ozi na ihe onwunwe nke ndị na-eso ụzọ ga-abụ "Ala Dị Nsọ" nakwa na ya ga-ewere aha "Little Pebble."
1983 (Midyear): Ndị otu MWOA malitere nzukọ na 6 AM n’ụbọchị Mkpuchi Mmehie (nke iri na atọ n’ọnwa ọ bụla) na Bangalee Property of Price maka nzukọ ekpere elekere iri na abụọ. E kwuru na Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke bụ Meri pụtara n'etiti Noon na 4 PM.
1983 (July 16): Kamm na Anne Bicego lụrụ na Immaculate Conception Catholic Church, Unanderra.
1983 (October 7): Kamm natara ozi maka "gburugburu" na ihe onwunwe Cambewarra nke ezinụlọ Ahịa ga-abụ "Lourdes nke Australia."
1983 (November 1): Kamm natara ozi ihu ọha mbụ ya. Ndị na-eso ụzọ malitere ikesa ozi a n'ọtụtụ ebe.
1984 (Disemba 2): Bishọp William Murray zipụrụ akwụkwọ ozi ụkọchukwu ("On True Devotion to the Holy Virgin Mary") na-ekwu na "ọ nweghị uru karịrị nke karịrị na ozi ndị onye kpọrọ onwe ya" Obere obere Obere "nyere. ”
1984 (Disemba 8): Thelọ nsọ dị na Camberwarra meghere ọha na eze. Narị mmadụ abụọ na-eso ụzọ MWOA gbakọtara na "Ebe Nsọ" na ndị mgbasa ozi nọ.
1985 (March 21): Kamm natara ozi na-arịọ ntọala nke Order nke Saint Charbel ma kwuo maka papacy n'ọdịnihu.
1987 (Eprel 24): Obodo Charbelite dị na Gilgandra gakwuuru Bishop Patrick Dougherty na Diocese nke Bathurst maka ngọzi na nkwado.
1987: Kamm zutere Nna Malcolm Broussard na Texas; Broussard sonyeere ndị Charbelites na Cambewarra.
1990 (November 14): Kamm natara ozi na nwunye mbụ ya, bụ Anne, ga-anwụ n'oge na-adịghị anya na onye na-eso ụzọ Bettina Lammerman ga-abụ nwunye ya. Kamm nyere Lammerman akwụkwọ ozi.
1991 (March 19): Kamm lụrụ Lammerman na Germany.
1991 (August): nwunye mbụ nke Kamm, Anne, hapụrụ obodo Charbelite na Nowra na ụmụ anọ nke Kamm ma wepụ ya na otu.
1991/1992: Kamm natara mkpughe na-agwa ya ka ọ họrọ Queens iri na abụọ na ụmụ nwanyị iri asaa na abụọ ndị ga-amị mkpụrụ ya na "New Holy Era."
1998 (October 6): Bishop Philip Wilson nke Wollongong kwupụtara na Diocese ga-ehibe kọmitii iji nyochaa Kamm na Order nke Saint Charbel.
1999 (Mee 6): Ndị Charbelites wepụtara nkwupụta mgbasa ozi na-ekwu na ha natara nkwado Chọọchị site n'aka Bishop Bartholomew Schneider (bishọp Thuc Line).
1999 (September 27): Bishop Wilson nyere iwu megide Order nke Saint Charbel.
2000 (May 5): Bishop Wilson guzobere kọmitii nyocha n'okpuru nduzi nke onye ọka iwu canon bụ Fada Kevin Matthews.
2002 (June 16): Bishop Peter Ingham (onye Bishop Wilson nọchiri) nyere iwu megide Kamm.
2002 (July): femalemụ nwanyị anọ nọbu na-akpọtụrụ ndị uwe ojii gbasara ebubo nke mmejọ mmekọahụ nke Kamm mere. Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchedo Childmụaka guzobere Strike Force Winefried.
2002 (August 8): E jidere Kamm na obodo dị nso na Bomaderry ma bo ya ebubo mmejọ ụmụaka na iri na atọ megide ndị bụbu mmadụ abụọ. Ndị uwe ojii na-egbu ikike nyocha dị egwu na isi ụlọ ọrụ Cambewarra nke ndị Charbelites, na-ejide ngwa ọgụ na akwụkwọ.
2003 (March 30): Broussard bụ onye bishọp doro Bartholomew Schneider na Bavaria, Germany.
2003 (June 10): Bishop Ingham nyere iwu na amataghị ịhọpụta episcopal Broussard.
2005 (July 7): Kamm mara ikpe site na ebubo nke ebubo ise nke ịkatọ na mmegide mmekọahụ nke nwa agbọghọ site na Sydneylọikpe Obodo Sydney.
2005 (Septemba 15): Pope Benedict XVI kwupụtara Broussard dị ka onye a chụpụrụ na steeti ụkọchukwu ("emebila").
2007 (May 30): A mara Kamm ikpe nke mmejọ ụmụaka na-emejọ megide onye nke abụọ na Districtlọikpe Ọchịchị Sydney.
2013: Kamm malitere ịnata ozi mgbe ogologo oge gachara.
2014 (November 14): Bishop Antoine-Charbel Tarabay (Bishop nke Maronite Eparchy na Australia) wepụtara nkwupụta ihu ọha na-ekwughachi ọnọdụ Chọọchị na Kamm na Order nke Saint Charbel.
2014 (November 15): Kamm wepụtara n'ụlọ mkpọrọ na parole.
2014 - Ugbu a: Kamm chọrọ usoro iwu maka mkpọrọ na ọgwụgwọ n'ụlọ mkpọrọ ma na parole.
A mụrụ William Kamm na 1950 na Cologne, West Germany, nwa a na-edeghị akwụkwọ nke onye ọrụ ndị agha Italy (onye Kamm kwupụtara na ọ bụ agbụrụ ndị eze) na nne German, ma mee baptizim na Chọọchị Roman Katọlik. Mgbe ọ dị afọ atọ, ezinụlọ Kamm kwagara Australia dị ka akụkụ nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị Europe bụ ndị jiri enyemaka gọọmentị nye ndị ọrụ aka, na-edozi na Renmark, South Australia, mpaghara nke nwere mmasị na ndị Germany si mba ọzọ. Mgbe ole mgbe ọ dị afọ iri na atọ, nne Kamm kpọgara ụmụ ya gaa n'ebe dịpụrụ adịpụ nke Sunshine na Melbourne, Victoria, bụ ógbè a na-ewu ewu na ndị si mba Europe na-aga agha. N'ikpeazụ, mgbe ọ dị afọ iri na ụma Kamm [Foto na nri] kpaliri nne ya, di ọhụrụ ya, na nwanne ya na Wollongong na New South Wales, bụ ebe a na-arụkarị ọrụ na mpaghara ndịda Sydney maka ọrụ nchara ya na otu ọkwá na-ewu ewu. ndị Europe na-akwaga n'ebe ndịda Europe.
Ọ bụ ezie na Kamm ezinụlọ ya enweghị okpukpe, Kamm na-aga Katọlik mgbe ụfọdụ dịka nwatakịrị nwere ezinụlọ Italian dị na Renmark ma gosipụta ụdị nke Katọlik ndị Katọlik na-ewu ewu na-eme njem na Southern na Eastern Europe na-abanye na Sunshine na Wollongong. Otú ọ dị, mgbe ọ dị afọ iri na ụma, Kamm ghọrọ onye nwere mmasị n'ihe banyere okpukpe, karịsịa site na ndụ nke Padre Pio, onye a ma ama na Ịtali, na mgbe ọ dị afọ iri na isii aghọwo nwa nwoke ebe ịchụàjà. Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, otu onye ụkọchukwu nọ n'ógbè Kamm nọ na-eme ka mmekọahụ nwee mmekọahụ n'ebe ọ nọ, otu okwu nke o mesịrị kọọrọ ndị ọchịchị Chọọchị. Kamm hapụrụ akwụkwọ mgbe ọ dị afọ iri na ụma wee malite ịrụ ọrụ dịka onye ozi na Wollongong. N'otu oge ahụ, Kamm bịara na-esiwanye ike ma malite ịga Nkume kwa ụbọchị.
Ka ọ na-erule afọ iri na asaa, Kamm nwere mmasị na ngosipụta Marian dị iche iche, gụnyere ndị nọ na Palmar de Troyes (Spain) na San Damiano ()tali), wee nata nke mbụ n'ime ọtụtụ ọhụụ mgbe ha na-aga Masde Sunday Mass na Katidral St Francis Xavier na Wollongong n’afọ 1968. Ọ nụrụ olu Nna nke Mgbe Ebighi-ebi na-agwa ya na ọ ga-abụ onye nsọ dị nsọ ma dịkwa nsọ, na ọ ga-alụ ma hiwe ezi na ụlọ dị nsọ e ji ama atụ, na ya ga-ahụkwa ọbịbịa nke Kraist nke Ugboro abụọ. Kamm gara n'ihu na-arụ ọrụ dịgasị iche iche wee sonye na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, ọkachasị ndị raara onwe ha nye ịgbasa ozi jikọtara na ngosipụta dị iche iche na ndị ọhụụ. Na nke a, Kamm malitere ịgụ ozi dị iche iche a na-achọghị ka ndị ọhụụ dị ugbu a, ọkachasị ndị onye France na-akwaga na Melbourne aha ya bụ Yves Dupont kesara. O kwenyesiri ike na ụmụ mmadụ abanyela n'oge nsogbu na-abịanụ tupu oge ikpeazụ.
Na oge a, Kamm ghọtakwara ozi nke oge a, bụ nke dị oké egwu banyere ihe a na-ahụ dịka ihe arụ ụka na nkà mmụta okpukpe nke na-abanye n'ime Chọọchị Roman Katọlik dị ka nsonaazụ nke Council Second Vatican (1962-1965) ma nwee mmasị na mbipụta ọdịbendị dị iche iche . Site na njedebe-1960, Yves Dupont, site na magazin ya Ụdị Ụwa na obere akwụkwọ ụlọ Tenant Press, aghọwo onye isi obodo Australia. O kesara dị iche iche apocalyptic Marian ihe onwunwe ma na-akwalite nkwenkwe omenala megide mgbanwe okpukpe na ozizi na Chọọchị. Dupont wee ghọọ isi ihe dị na subculture nke post-Vatican II Catholic apocalypticism na akwụkwọ 1972 ya Amụma Katọlik, [Foto dị na nri] nchịkọta oge amụma oge ikpeazụ nke ụbọchị dị iche iche sitere na mbubreyo oge ochie ruo n'agbata narị afọ nke iri abụọ. Ọ bụ ezie na Kamm na Dupont ezutebeghị, mbipụta nke akwụkwọ ndị a nwere mmetụta siri ike n'inwe mmekọrịta ime mmụọ na nghọta nke Kamm na nghọta nke amụma.
Na 1972 ma ọ bụ 1973, Kamm guzobere otu òtù a maara dịka Marian Work of Atonement (MWOA) na nzube nke ịgbaghara Chineke site na Nwa Nwanyị Mary, sitere na onye Portavoz onye Mexico na-enweghị mmasị. Otu a gunyere nzukọ nzukọ na New South Wales na Ahịa Australia Isi Obodo ma hazie ebe ndị dịpụrụ adịpụ na Carmelite na Schoenstatt. N'ime oge a nile Kamm rụrụ ọrụ dịgasị iche iche na Sydney na Wollongong. N'otu oge ahụ, o mere ka nkwanye ùgwù Marian dịkwuo oke dị ka ụkpụrụ nke St. George-Marie Grignion de Montfort na narị afọ nke iri na asaa na-edozi St. Louis-Marie Grignion de Montfort ma doo onwe ya nsọ dịka "Onye Mkpụrụ Obi." N'oge a, Kamm kewapụrụ na Charismatic Emeghari ohuru ma bido itinye aka na nkwalite nke Fatima na ozi ndi ozo ndi a kwadoro na nke a na-akwadoghi site na abali abali na ihe nkwado.
Ihe dị ka 1976, mgbe mmekọrịta dara, Kamm nwere nsogbu nke okwukwe wee kwụsị ọrụ ndị metụtara MWOA ma gaa naanị Mass n'oge ụfọdụ. Kaosinadị, na 1978 ọ nwetara ọhụụ na-akasi obi nke Virgin Mary n'oge na-adịghị anya ọ laghachiri otu ekpere. Ọ bụ ihe dị ka n'oge a ka Kamm nwere mmasị na ngosipụta nke Veronica Lueken na Bayside na Queens, New York. Na November nke 1979, ọ nwetara ọhụụ na-agwa ya ka ọ gaa Bayside. Kamm hapụrụ New York na Disemba 28, 1979, ebe ọ nọrọ obere oge, na-ekpe ekpere na Nne anyi di aso nke ndi Roses Shrine maka afọ Ọhụrụ. Mgbe ọ laghachiri n'Australia, ọ malitere ịkwalite ozi ndị Bayside site na brochures, nkesa nke Roses akwukwo ohuru, na nzuko ekpere ndi joro MWOA n'ime ndi Diocese nke Wollongong na ndi ozo. Ọ bụ ebe a ka ndị isi obodo nke mbụ batara ya ntị.
Na May 1980, Kamm gara Bayside ọzọ. Otú ọ dị, ndị uweojii gbara ya ajụjụ na Sydney Airport mgbe onye ụkọchukwu ibe ya, onye nyere Kamm ego maka njem ahụ, ka Kamm ji zuo ya. Mgbe ọ bịarutere Niu Yọk, Kamm zipụrụ ego na-akwụ ụgwọ, na-alaghachi ego ọ gbazitere. Mgbe ọ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ nzipu ozi n'oge nleta nke abụọ ya na Bayside, Kamm na ndị ọrụ ndị ọzọ nọ na Lueken sụgharịrị ya na "gburugburu obi." Mgbe ihe gbasara ebubo metụtara ụmụ nwanyị nke akụkọ nta akụkọ Canada bụ Anne McGinn Cillis na nkwupụta ndị ọzọ na-ekwesịghị ekwesị na onye nkwado ọzọ, bụ Kamm gwara ya ka ọ hapụ ụlọ nsọ. Nwunye di na nwunye mesịrị dee Kamm mgbaghara maka ihe ahụ merenụ. Ihe ebubo nke Cillis ga-alaghachi na-abanye Kamm na afọ ndị gara aga mgbe e mere ka ọha na eze mara ọkwa n'ihu ọha Sydney Morning Herald.
Mgbe ọ laghachiri Australia, Kamm enweghị ike ịchọta ọrụ ma banye na ndị enyi ya na Wollongong ebe ọ nọgidere na-akwalite ozi Bayside nke, n'oge a, aghọwo ihe na-echegbu onwe ya maka ogbako Episcopal nke Australian (AEC, mgbe e mesịrị, Nzukọ Bishop nke Australian Katọlik, ACBC). N'ime oge a, esemokwu dị na MWOA, ebe ọtụtụ n'ime ndị ezinụlọ na-akpaghasị njikọ na mmegharị ahụ. Ndị nọgidere na-etolite "obi dị n'ime" nke mesịrị ghọọ isi nke Order nke Saint Charbel.
Malite na March 7, 1982, Kamm malitere ịnata ozi sitere na Virgin Mary, na-arịwanye elu ugboro ugboro n'afọ ọzọ. Tinyere ihe ndị ọzọ, ozi ndị a, ọ bụghị ihe niile e mechara mee n'ihu ọha ozugbo ma ọ bụ mgbe e mesịrị, rịọrọ ya na ndị òtù MWOA na-amalite ịmepụta catacombs ma bido ọzụzụ maka ịkwado maka nsogbu ndị ga-eso ụbọchị ikpeazụ. Na July 16 nke otu afọ ahụ, Kamm nwetara ozi na-agwa ya na a ga-akpọ ugbo na Cambewarra, nke dị na Nowra, dị ka "Ebe Nsọ." Kamm ga-ewere aha-de-plume nke obere Pebble, o doro anya iji hụ na e lekwasịrị anya na ozi ahụ ọ bụghị onye ahụ. Kamm malitekwara ime ka ndị ozi obodo ya mara ọkwa ya na Bishop nke Diocese nke Ọnụnọ, Thomas Muldoon. Ha nile weghachitere otu a, na-echekwa, n'etiti ihe ndị ọzọ, banyere ihe ndị dị ndụ na nchekwa na ọrụ mmemme agha.
Site n'etiti 1983, ndị òtù MWOA malitere nzukọ na 6 AM n'ụbọchị nke iri na atọ nke ọnwa ọ bụla maka "Ụbọchị Mkpuchi Mmehie" n'ala dị nsọ na Cambewarra. [Foto dị n'aka nri] Ha gbakọtara ruo awa iri na abụọ n'ekpere, mgbe Virgin Mary ga - apụta n'etiti Noon na 4 PM. Kamm lụkwara Anne Bicego na July 16, 1983. Ka ọ na-erule ngwụsị nke 1983, e nwere otu ekpere dị iche iche nke MWOA n'ọtụtụ ebe ime obodo New South Wales na Obodo Obodo Australia. Otú ọ dị, dị ka nkwenkwe nke Kamm na-esiwanyewanye ike na arịrịọ ndị a kapịrị ọnụ nke ndị nọ na ozi ahụ bịara dịkwuo mkpa, ọtụtụ ezinụlọ ndịwapụrụ na otu. Ndị ọzọ mekwuru ka ha tinye aka, na October 7, 1983, Kamm natara ozi na ihe onwunwe Cambewarra nke ezinụlọ ndị na-eso ụzọ ya bụ "Lourdes nke Australia." Na November 1, 1983, Kamm natara ozi ihu ọha mbụ ya. O weghachiri otutu ihe ndi ozo di n'ilezi ndi isi uka Roman Katọlik maka ihe omuma ohuru di iche iche, karia ihe kariri ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu no. Ozi ndị ọzọ nwetara ma kesaa Kamm na ndị na-eso ụzọ ya site na brossedet isiokwu Nne anyi di aso bia Australia n'ime ọnwa ndị na-esote, n'oge na-adịghị anya, ndị ọchịchị Chọọchị bịara leta ya.
Ka ọ na-erule June 1984, Bishop William Murray nke Diocese nke Wollongong nọ na-echegbu onwe ya banyere akụkọ ndị ọ na-anụ banyere ìgwè na ihe ha na-ekesa. Ọ na-egosi na o nyefewo nyocha nke onwe ya na ọdịnaya nke ozi ndị a site n'aka onye ọka iwu dabeere na Sydney nke kwubiri site na nlebara anya na ụlọ Kamm abụghị eziokwu. Mgbe o nwetakwara ihe ọmụma banyere ndị ozi na-enweghị nchebe na ndị ụkọchukwu ndị nwere nchegbu, Bishop Murray gara ịgakwuru onye ọkà mmụta okpukpe ọzọ na Sydney bụ onye kwubiri nke ahụ na ozi ahụ abụghị eziokwu ma na-adụ ọdụ ka Bishop Murray dee obere okwu dọrọ ndị Katọlik aka ná ntị. Mgbe o nwetasịrị akụkọ nke abụọ a, Murray gwara Kamm ka ọ gaa nnọkọ nzuzo nke ọ gwara Kamm banyere omume ya ma gwa Kamm ka ọ kwụsị ikesa ozi ahụ. Kamm jụrụ, na-ekwu na ọ ga-ebute Chineke ụzọ kama ịbụ onye bishọp ya. Ihe omume a mere ka obi sie ike ihe ga - eme ka mmekọrịta dị n'etiti Kamm na ndị bishọp nọchiri nke Wollongong.
Na December 2, 1984, Bishop Murray nyere akwụkwọ ozi pastoral Na Ezi Nkwupụta Nye Mary Mary Ngọzi bụ nke o kwuru na Kamm na-ekwu na ọ na-enweghịzi ike sitere n'aka mmadụ dọrọ ndị òtù obodo aka ná ntị ka ha ghara itinye onwe ha na Kamm na ụlọ nsọ ya. Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ kwụsịrị ịnọnyere Kamm n'oge a, ma n'agbanyeghị akwụkwọ ozi pastoral, a gbaghaara ịdọ aka ná ntị nke Mur Murray. [Foto dị n'aka nri] N'ezie, site na mmalite mmeghe na Disemba 8, 1984, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị pilgrim malitere ịbanye n'ụlọ nsọ nke Lady anyị nke Igbe na Cambewarra maka Ụbọchị Mkpuchi mmehie kwa ọnwa bụ ebe ha na-ekere òkè na ụbọchị ndị Katọlik omenala na Marian devotions.
Dika otutu ndi mmadu na-ewu ewu na ndi nguzogide nke Church gara n'ihu izi ozi nke Kamm natara n'aka Virgin Mary na ndi ozo ndi choro Katọlik malitere igbanwe site na ozizi Roman Catholic. Na 1984, Kamm natara ozi na ọ ga - abụ "Agha nke Eziokwu" ma mee ka ndị niile hụrụ anya na-arụ ọrụ ugbu a n'ụwa nile n'okpuru nduzi ya. Ozi a mere ka mụ na Kamm na ndị ọzọ na-ahụtụbeghị anya si Australia na gafee ụwa. Otu n'ime ndị a (Texan aha Andrew Windgate, onye aha ya bụ Trumpeter) natara ozi na 1984 nke kwuru na Kamm ga-abụ Pope na-esote na Pope ikpeazụ na Pope John Paul II ma bụrụ onyeisi nke Chọọchị onye kpalitere na njedebe oge.
Ọrụ Little Pebble dịka onye amụma nke otu puku afọ ga-abụ ogidi nke ogige ime na nke Order Order nke Saint Charbel, na afọ iri na ọkara na-abata na Kamm nke e buru n'amụma na nke a na-egosi na ọ bụ site na nchịkọta ozi zigaara ya ma ọ bụ site na ndị ọzọ hụrụ ya. Otu n'ime ndị a bụ onye ọhụụ nke Canada na-eji aha Thornbush (Danielle Gervais) soro ndị òtù Quebecois kwadoro Order of the Immaculate Heart and of St. Louis de Marie-de-Montfort, bụ nke na-ejikọta ya na Order ahụ ruo oge ụfọdụ. nke Saint Charbel. N'ihe dị ka n'oge a, usoro mgbasa ozi mbụ na-eduzi na MWOA malitere ịpụta na telivishọn na akwụkwọ akụkọ.
Otutu ndi mmadu mara Kamm na-etolite, karia n'etiti ndi Southern na Eastern Eastern ndi ozo na-abanye Australia, na, ma o buru na mbu, ndi otu n'usu obodo ndi Lebanon. Kamm natara ozi na mmalite 1985 na-adụ ya ọdụ ka ọ kwadebe usoro iwu ọhụrụ n'ime Chọọchị Roman Katọlik nke a ga-akpọ ya Order nke Saint Charbel, aha ya bụ onye ụkọchukwu nke Maronite Charbel Makhlouf (1828-1898). Iji mezuo nke a, Kamm gara Rome na ọnwa na-eso ya, na April 19, 1984, Kamm ka e photographed ya na Pope John Paul II mgbe ọ natara ọrụ na nzuzo. [Foto dị n'aka nri] Foto a bụ ịchọta ugboro ugboro na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ ma bụrụ akụkụ nke akụkọ ntọala nke otu. Kamm mechara kwuo na ya kwupụtara ozi ya banyere ntọala Order na Pope n'oge nleta a na ịnata nkwenye ya, ihe ndị ọrụ Vatican gọnahụkwara ya. N'ime oge 1985 na 1986, ọrụ Kamm nọ na-eto, ọtụtụ ndị na-ahụkwa mba dị iche iche wee soro ya. Otú ọ dị, ndị ọzọ, dị ka Fr. Stefano Gobbi, jụrụ nkwenye ya. N'October 13, 1986, MWOA mere nnukwu "nchịkọta nke ndị hụrụ" na ala dị nsọ na ọtụtụ ndị na-azọrọ na ha hụrụ ọrụ ebube nke anyanwụ.
Ikekwe ịmara na ikikere ịchọta iwu agaghị abịa na Wollongong n'ihi nkwenye nke Bishop Murray, Order nke Saint Charbel guzobere obodo mbụ "ndị isi" na Gilgandra n'ime ime obodo New South Wales Diocese nke Bathurst. Na April 24, 1987, obodo a nyere iwu mbụ ha n'aka Bishop Patrick Dougherty ma chọọ ngọzi ya na nkwado ya. N'ịmara ọnọdụ dị na Wollongong, na mgbe ọ kwusịrị okwu banyere Bayside mgbe ọ bụ odeakwụkwọ nke AEC, Bishop Dougherty nyere akụkọ sitere n'aka onyeisi ndị ọchịchị diocesa, bụ Monsignor Laurence Jennings n'ime ọrụ nke ndị Charbelites.
Akụkọ Jennings 'nke ọma na nke ziri ezi hụrụ ọtụtụ nsogbu na ndị obodo dị na Gilgandra, gụnyere nke ahụ, mgbe ha na-achọta na ndị òtù ahụ nwere ezi obi na ndị na-asọpụrụ Chineke, ha na-egosi na ha bụ ndị na-ekewapụ onwe ha na mgbarịta ụka na obodo. Jennings kwadoro ka a ghara inye ya na Bathurst, ma nke ahụ mere ka ọ bụrụ na ọ bụ na mkpọsa nke ndị otu ahụ ka ọfụma mbụ nke Murray na-eme, nchọpụta nke ndị Diocesa nke ọma (ma ọ bụ na Diocese nke Wollongong ma ọ bụ Bathurst) ga-enwe ohere iji gbochie nsogbu ndị ọzọ. O yighị ka ndụmọdụ a ọ dị, ọ bụ ezie na obodo Gilgandra dị mkpụmkpụ.
Na May 1987, Kamm zutere otu ụkọ Texan, nna Malcolm Louis Broussard, onye bụbu onye nduzi ime mmụọ nke onye ọhụụ Trumpeter ma kwenye ya ka ọ sonye na obodo Charbelite nke dị n'Australia. Papa Broussard hapụrụ ozi ọma ya na Diocese nke Galveston-Houston ma hapụ United States ịbanye na Charbelites na September nke afọ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị Japan abụọ bara ọgaranya nke ozi ahụ kwadoro ịzụta ogige ntụrụndụ dị nso na Ground Grounds na Cambewarra, a na-amanye ndị nwe ụlọ ire ere mgbe ha gbasiri ike na Kamm na ndị na-eso ụzọ ya na-ewu ụlọ agha ha achụpụ ahịa. Site n'enyemaka nke Fr. Yves-Marie Blais, onye ọkàiwu Canon na onye ndú nke Ụlọ Obi Na-ahụ Maka Obi na nke St. Louis-Marie de Montfort, Kamm na ndị òtù nke ime ụlọ ya malitere ịdegharị akwụkwọ nke Iwu na iwu nke Order Saint Charbel akọwapụta usoro na charism nke Order nke Saint Charbel ga-agbaso. Nke a mechara mee ka ndị nọ na Datasteries dị iche iche dị na Vatican, ọ bụ ezie na ha enweghị ihu ọma.
N'ime 1980s na 1990s Kamm na ndị na-elekọta ya nọgidere na-enwe usoro njem oge, na-agbasa ozi ya site n'ọtụtụ ebe dị na Europe, Asia, Africa na North America. Ọganihu nke Kamm na nkwado nke onwe ya mere ka ọ ghọọ onye isi na subculture ọhụụ nke Marian, ọ bụ ezie na nke a egbochighị ya inweta nkwenye sitere n'aka ndị ọhụụ ọzọ gụnyere ndị na-ahụ anya na Medjugorje, Fr. Stefano Gobbi, na Veronica Lueken. Kamakwa, onye French Mariologist Rene Laurentin kwadoro Kamm. N'agbanyeghị nke a, e guzobere ọtụtụ ekpere n'ụlọ ọtụtụ mpaghara, gụnyere n'Africa na India ebe ndị Charbelites nyekwara ụfọdụ ego dị ntakịrị maka ụlọ na nlekota nke ụka dị n'ógbè ndị dara ogbenye. Nke a mere ka ọtụtụ ndị Roman Roman Katọlik dị ịrịba ama, tinyere Kadinal Antony Padiyara nke India na Kadinal Jaime Sin nke Philippines, na-ebido inye ngọzi ha na ntọala Charbelite na otu ekpere. Ma ọ dịkarịa ala na ikpe ikpe azụ, a kwadoro nkwado na ịchọpụta ihe banyere nsogbu nke Kamm na ndị isi chọọchị ma ọ bụ mgbe ìgwè ndị a na-eme mkpọtụ na mgbakọ ụka. Kamm na-enwekwa ihe jikọrọ ya na esemokwu ahụ (ma mesịa mebie) Akwa Bishop Emmanuel Milingo.
N'ime oge 1980s na 1990s, Ụlọ Nne nke kọwara onwe ya, bụ Community of Gethsemane na Cambewarra, ji nwayọọ nwayọọ na-eto eto, mesịa mepụta ụlọ akwụkwọ ya na ịzụta ụdị ahịa azụmahịa na obodo. [Foto dị n'aka nri] E nwekwara mpaghara ndị ọzọ na Australia na n'èzí. Site na mmalite nke 1990s Kamm amalitela ịnata ozi na-egosi na ọrụ ya ga-arụ ọrụ ga-agụnye ọchịchọ nke agbụrụ ọhụrụ dị nsọ iji weghachi ụwa n'oge Millennium New Holy Era. Kamm natara kwa anya nke omuma nke Kraist nyere ya "ihe di iche iche nke onwunwu" (ihe banyere ya Ndụ nke Kraịst site na narị afọ nke iri na itoolu na Germany hụrụ Ngọzi Anne-Catherine Emmerich, ọkacha mmasị karịsịa nke Kamm) nke ọ ga - esi kesaa mkpụrụ nsọ ya. Na njedebe a, Kamm malitere izukọta gburugburu ya ezinụlọ dị nsọ (nke a na-akpọ Royal House David), nke ga-agụnye Queens na iri asaa na abụọ na-achị ụmụ nwanyị si n'etiti ndị nọ n'ime ime.
Ihe ngosi ndị a, bụ ndị siri ike ka ha dina ma ha yiri ka ha malitere n'etiti 1991 na 1992, yana nkwalite mmekọrịta Kamm na Bettina Lammerman, nwa nwanyị iri na asaa nke onye na-eso German, na 1991 dugara nwunye nwunye ya Anne ahapụ ya na ụmụ ha na ọtụtụ ụmụazụ ndị ọzọ. Nke a gụnyere onye ụkọchukwu Poland, bụ Nna Miroslaw Gebicki, bụ onye gwara ndị mgbasa ozi na ndị isi Chọọchị nke Kamm na ọrụ mpụ. N'afọ iri na-esote ma ọ bụ karịa, a kwenyere Kamm na ọ mụta ụmụ iri abụọ site na ọtụtụ ụmụ nwanyị dị iche iche ma kpọọ ma ọ bụ were ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ụmụazụ nwanyị dịka nwunye ya. Nke a kpatara esemokwu n'etiti na njem site na otu dị ka ozi Kamm mara ndị nwunye nke ndị ọzọ nọ na ezinụlọ ya.
N'otu oge ahụ omume na ozizi ndị dị n'ime ozi Kamm (dịka ọmụmaatụ banyere ime ime na ihe gbasara ịre nwa nwoke n'ike) hụrụ ọtụtụ ndị nọ na ha dị n'otu na otu obodo dị iche iche kpebiri ịhapụ ìgwè ahụ. Nke a, n'aka nke ya, dugara n'ọtụtụ esemokwu ego n'etiti Kamm na ndị òtù mbụ, ụfọdụ n'ime ha tinyere ego dị ukwuu, nke mere ka ndị bishọp nke Australia, bụ ndị ndị òtù mbụ na-eme mkpesa na-akpọtụrụ Kamm ugboro ugboro Omume Kamm.
N'agbanyeghi ntule nyocha site na nchoputa mbu nke ndi Bishop Bishop Murray na Dougherty kwadoro, na ntuziaka ndi ozo site na Akwa Bishop George Pell nke Melbourne na 1997, Kamm gara n'iru ichota mkpa maka nyocha nke oma banyere ihe ndi ozo na nke Charbelites. N'okwu a na njedebe nke 1997, Kamm kwuru na ọ bụ megide Diocese nke Wollongong, nke ugbu a n'okpuru nkwekọrịta bishọp bishọp Philip Wilson, na-agbalị ịmanye ndị Diocese ka ha gaa nyocha nchọpụta nyocha ya. Na nzaghachi ya, na nkwado nke ogbako ndị Bishop nke ndị Katọlik na ọgbakọ nke Okwukwe nke Okwukwe, Bishop Wilson gwara Kamm na ọ ga-amalite nnyocha nchịkọ ụka n'ime nkwupụta na ọrụ nke Kamm.
Ọ bụ ezie na nchọpụta a dị na mbido ya, ka ọ dị, ndị Charbelites, na-enwe nkụda mmụọ n'ihi ihe ha kwenyere na enweghi ọganihu, wepụtara Nkwupụta Nkwupụta na Mee 6, 1999 bụ nke ha kwuru na ha natara ọkwa n'aka Bishop Bartholomew Schneider, ebubo Thuc Line bishọp na-arụ ọrụ na Spain na Germany. Ihe omume a, na ihe akaebe ndị ọzọ nke nnabata ụka nke ndị Charbelites nyere Commission, ka enyochachara nke ọma. Na Septemba 27, 1999, Bishọp Wilson nyere iwu nke na-agwa Order of Saint Charbel ka ọ kwụsị igosi onwe ya n'ihu ọha ma na-agwa ndị otu ya ka ha kwụsị ịza akwụkwọ ụka ọ bụla n'ime Katọlik. Bishop Wilson, Ọzọkwa, kpọrọ Kamm ka ọ mechie iwu ahụ. Ndị Charbelites zaghachiri site na ịghachitere nzere Bishop Wilson, nke mbụ nye Kadịnal Edward Clancy na Sydney ma mesịa ziga Pope John Paul II.
Na May 5, 2000, Bishop Wilson guzobere ọrụ nyocha, onye ọkàiwu nwere ike ịchọta ya site na Diocese nke ọzọ, papa Kevin Matthews, nke gụnyere ndị ọkà mmụta okpukpe abụọ na ndị ọkàiwu nwere ike abụọ. Ihe nkenke ha bu ichoputa ihe odide nke Kamm na ndi Charbelites na iji kwado ma ha bu ndi nkuzi nke ndi Katolik. Mgbe nyochachara ihe odide ya na ozi ya, na ọtụtụ nyocha dị mma nke ezitere ndị na-eso ụzọ, ọrụ ahụ mesịrị gbaa ajụjụ banyere Kamm na October 21, 2000. A chọkwara ndị ọkà mmụta okpukpe Katọlik abụọ na ndị ọkàiwu nwere ike ịchọta akwụkwọ ndị Kamm na ọchịchị ndị Charbelites. Ihe nchoputa nke nzuko nzuko diocesa bu ihe ojoo. Nkọwa ikpeazụ nke Matthe Matthe kwuru na Kamm na ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị ntụgharị, na nkuzi nke otu (karịsịa ndị metụtara ọrụ Kamm si na-esite na ya) bụ ihe atụ, na Kamm gosipụtara abụghị eziokwu, nakwa na a pụghị ịnakwere Order nke Saint Charbel ma bụrụ emerụ ndị òtù ya.
Ná mmalite 2001, Commission nyefee akụkọ ya na ọgbakọ maka ozizi nke Okwukwe. Na March 2002, Ọgbakọ maka Okpukpe nke Okwukwe dere akwụkwọ ozi na Bishop Peter Ingham (onye Wilson Wilson) nọ na-ekwupụta ọchịchọ ya na, dị ka Bishop nke Wollongong, ọ na-enye iwu megide ìgwè ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị òtù ahụ hapụrụ obodo Andra na Charbelite ma kwupụta nchegbu ha banyere nduzi Kamm na Intanet na site na listi ozi nzipu ozi nke otu.
Na June 16, 2002, Bishop Ingham nyere iwu na-akpọ maka Kamm ka ọ hapụ ihe ndị ọ na-ekwu na ndị Charbelites ka ha ghara. Ndị Charbelites kwụsịrị ịmara nke a ma rịọ Rom. N'oge na-adịghị anya ka e nyere akara a, ụmụ nwanyị anọ nke ndị Charbelites kpọtụrụ ndị uweojii gbasara ebubo nke mmejọ mmejọ Kamm mere. N'ihi ya, Strike Force Winifred guzobere site na New South Wales Child Protection Agency.
Na August 8, 2002, ndị uweojii gbara ọsọ na obodo Charbelites na Cambewarra, Kamm bụ ejidere ebe obibi ma boro ya ebubo nke mmejọ ụmụaka na-eme ihe megidere ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ ya. E mesịrị mara ya ikpe maka mpụ ndị ahụ ma jee ozi afọ itoolu. [Foto dị na nri] Mgbe nkwenye mbụ nke Kamm gasịrị, ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị fọdụrụnụ hapụrụ. Na nmalite nkwenye mbụ Kamm na July 7, 2005, nchọpụta nke abụọ, bụ Strike Force Winifred 2, guzobere ndị uweojii. O mere ka ebubo n'ihu na nkwenye nke abụọ maka Kamm na May 30, 2007.
Ka ọ dị ugbu a, ndị Diocese nke Wollongong kwalitere nchegbu na enyi Kamm, bụ Nna Broussard, na-eme atụmatụ ka e doo ya nsọ site na Bishop Schneider. Nna Broussard bu onye bishọp site n'aka Bishop Schneider na March 30, 2003, nke dị na Bavaria, Germany, na-emebi iwu iwu na enwere ụgwọ nke ozi azu wepụ ya. Na June 10, 2003 Bishop Ingham nyere iwu iwu nke a, yana ịdọ aka ná ntị ndị fọdụrụ na Charbelites na ndị nọgidere na-agbaso ozi Broussard na-etinye onwe ha n'èzí Chọọchị Roman Catholic. N'afọ abụọ na-esonụ, Broussard nyere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ diaconate dịka iwu iwu, gụnyere Kamm. Ndị nwoke a mekwara otú ahụ ozi azu nkwukọrịta. N'oge edere ederede ndị a dịgidere maka ndị niile na-anọgide na-abụ ndị Charbelites. N'ịgbaso ntụziaka ndị a, ọgbakọ maka ozizi nke Okwukwe kwadoro arịrịọ na July 29, 2005, na Broussard ga-ewepụ ọrụ nchụàjà ya. Pope Benedict XVI mechara kpebie na September 15, 2005, ka a hapụrụ Broussard ex officio et pro bono Ecclesiae site na ụlọ ọrụ ụkọchukwu, ya bụ, na-emebi emebi. Iwu a enyeghi uzo ozo iji mee ka o nwekwuo mkpesa, obu ezie na Broussard kwuru na akwukwo nye ndi soro ya na o kwenyere na usoro ahu megide ya enweghi ikpe ziri ezi. Emeela ụfọdụ mgbalị site n'aka ndị isi diocesa iji mee ka ndị Charbelites, gụnyere Broussard, gaa Chọọchị Roman Catholic.
Na 2013, na-agbaso ogologo oge na mgbe a tụrụ ya mkpọrọ, kamm malitere ịnata ozigbo ozi nke gosipụtara nkwenye maka onye na-ese okwu Irish nke a maara dịka Maria Mercy Mercy (mana ọ bụ onye mgbasa ozi Dublin nke dabeere na ya bụ Mary Carberry) na ikwupụta nkwenye nke na papacy nke Pope Francis. A maara Pope na mpaghara ndị a dịka onye amụma ụgha na onye ụgha pontiff buru amụma na ozi dị iche iche natara Kamm na gburugburu ya kemgbe mmalite 1980s. Ozi ndị a abanyela ugbu a. A hapụrụ Kamm na parole na November 15, 2014. O nweela mgbe ọ na-arụ ọrụ iwu dị iche iche banyere ọnọdụ siri ike nke nkwupụta ya, nkwenye nke nkwenye ya, na ọgwụgwọ ya mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ndị otu ahụ ka na-ejide ọnụnọ Internet, Kamm na-aga n'ihu ịnata ozi banyere nsogbu dị iche iche nke oge a. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a na NSW Government na Ụlọikpe Kasị Elu ka o wee nwee ike ịnweta ọzọ ohere na Facebook na Twitter.
Ọdịnihu nke Order nke Saint Charbel, bụ nke nọ na-ada n'ihi mkpụmkpụ nke Kamm na ihe oriri nke anụ ahụ (ọtụtụ n'ime ndị nọ n'ime ime okenye), anọgideghị na-ejighị n'aka ma ga-echere otú Kamm na ụmụazụ ya si emeghachi omume ọnwụ nke Pope Emeritus Benedict XVI, bụ onye òtù ahụ nwụrụ anwụ de facto sedevacantist. Ndi otu a choro ikwurita uka na nzuko site na di iche iche di iche iche banyere nzuko ndi uka ha, obu ezie na azoputaghi akwukwo ndi ozo. N'oge edere (June 2018) akụkụ nke ala dị nsọ na Camberwarra ka a kwụrụ iji zute ụgwọ ọrụ iwu Kamm.
The Order of Saint Charbel na-ele onwe ya anya dịka iwu okpukpe Katọlik ma nọgide na-ekwusi ike banyere njirimara Katọlik, nke a n'agbanyeghị ọtụtụ akwụkwọ a na-akwado na Chọọchị. Chọọchị Roman Katọlik na-ele ndị ahụ anya ma na-atụgharị uche na schismatic. A maara nkwenkwe Charbelites nke ọma dị ka Marian ma ọ bụ Katọlik Apocalyptic, na-elekwasị anya na mkpughe nzuzo ("ozi si n'eluigwe") ndị ọhụụ dị iche iche natara site n'ụdị nlekọta anya, nhụpụta anya, ntinye aka n'ime ime, na ahụmahụ ndị ọzọ dị omimi. Ndị otu a nwere nkwalite siri ike na ọtụtụ ndị ọzọ Roman Catholic catering na mmalite ha na saịtị ndị ọzọ na-enweghị mmasị na ụwa (eg Palmarian Catholic Church, Army of Mary). N'ọtụtụ ihe, nkuzi nke ndị otu ahụ yiri nke ahụ dị n'etiti ndị Roman Roman Katọlik na-agbanyeghị aka n'ihe gbasara omume na omume ime mmụọ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ndị Charbelites na ndị òtù ọdịnala omenala na mbụ (dịka Society nke St Pius X), ndị otu a na-azọrọ ịnakwere, na nrịgo, mgbanwe nke Nzukọ Vatican nke Abụọ (1962-1965), ọ bụ ezie na a na-ahụkarị oge ahụ n'etiti ndi otu ndi choputara onwe ya ka achoghariri ya dika nzuko uzo karia nzuko ndi nkuzi. Ọzọkwa, karịsịa na nke mbụ ha dere, ìgwè ahụ na-ekwukarị Pope John Paul II nke ike Mariology na Charbelites nwere akpan akpan ùgwù.
N'ihe banyere usoro mmụta, ndị Charbelites na-eweta ụfọdụ ihe mgbagwoju anya. N'aka nke aka, ha na-ekwusi ike maka ochicho ha na Rom dika egosiri ha site ngbali ha iji nweta nkwado dika ukpuru okpukpe a ma ama n'okpuru ikike Pope; N'aka nke ọzọ, ebe ọ bụ na 1980s na-emechi nke a, e mesiri ya ike na ihe Akwụkwọ Nsọ Charbelite na-ezo aka na ya gụnyere ndị ọzọ dị ka "chọọchị nke catacombs," "ụka nke dị omimi," ma ọ bụ Chọọchị fọdụrụnụ. N'akụkụ nke ikpeazụ a, ìgwè ahụ dị ka ndị ọzọ "Marian Ark" ndị na-ahụ onwe ha dị ka ihe nsọ dị iche iche na-echebe omenala Katọlik na-adịghị edozi anya na ọdịbendị dị iche iche megide mmegide nke modernism, nke metụtara n'ụzọ dịgasị ngbanwe mgbanwe ndị sochiri Vatican II . Na ozi dịgasị iche, ìgwè ahụ dị iche n'etiti ụka nke ụka nke ụka bụ nke Kamm bụ onye Vicar nke Kraịst na onye na-apụ na Chọọchị rụrụ arụ n'ụzọ ime mmụọ nke ga-agafe na Kamm ka ọ na-abanye n'ụlọ ọrụ Papal (dịgasị iche iche mgbe ọ nwụsịrị mgbe John Paul nwụsịrị II ma ugbu a, o yiri ka ọ na - eso Pope Emeritus Benedict XVI na - agafe.
E wezụga ihe ndị a na-akụzi na okpukpe ndị Charbelites na ndị Katọlik nwere mmasị na ndị Katọlik, ndị Charbelites na-emepụta ihe dị iche iche site n'oge dị iche iche site na ndị dị iche iche nke Chineke dị iche iche banyere ọrụ ha n'ọdịnihu, karịsịa nkọwa banyere ọrụ nke eschatological Kamm. . Mgbe ha na-ekwu na Kamm ga-abụ pope ikpeazụ (Petrus Romanus) pụtara na mmalite nke akụkọ ihe mere eme ma na-agbaso isiokwu nke akụkọ ihe mere eme na akwụkwọ ndị Katọlik Katọlik (dịka ihe a na-akpọ Vaticinia de summis pontificibus na amụma ndị ọzọ na-ewu ewu na Saint Malachy nke Armagh), n'oge mmalite nke 1990s (karịsịa na 1993) Kamm malitere ịnata mkpughe na ọ bụ onye natara ọgbụgba ndụ atọ na Chineke. Ọ ga - abụ "obere Abraham" bụ onye ga - ewupụta ọgbọ ọhụrụ nke agbụrụ ahụ dị ọcha na New Holy Era, onye na - eme ihere nke na - ebute ọnyá nke Kraist, na Pope nke ikpeazụ a họpụtara maka Chọọchị. Na mgbakwunye na ọrụ ndị a dị elu, Kamm na-atụgharịkwa uche na ọrụ ya dị ka ihe ise nwere ike ịkwado nkwadebe nke ndị Chineke maka ọbịbịa nke abụọ: ịme ka ndị dị iche iche nke ndị Katọlik na ndị ọhụụ (kwadoro na enweghị mmasị) n'okpuru nduzi ya, iji zukọta n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ na Ndị Kraịst nọ n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa, ịchọta Order nke Saint Charbel, na iji wetara ndị niile nwere mmasị nzọpụta (lee Kamm 1999: iii-v).
Otú ọ dị, Kamm nwere ike iburu ọrụ papal ya, o yiri ka ụwa ga-ebu ụzọ banye "Ịdọ aka ná ntị dị ukwuu," ihe atụ dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-atụ anya na omume nke mmụọ dị iche iche dị na Garabandal na Spain na 1961 . "Ịdọ aka ná ntị" a ga-esochi ụdị mkpagbu dị iche iche n'ụdị ihe otiti, ala ọma jijiji, ụda na ọhụụ meteoro dị iche iche, nakwa site na agha dị iche iche dị n'etiti ike ụwa dị iche iche. Dika otutu ndi Catholic apocalypticist, ndi enyi nke Kamm ndi a na ndi nkwekorita na ekweghi na Chineke na ndi otu ndi Katoliko na-agbakorita uka banyere ndi Freemasons na ndi ozo. Mgbe ndị Kambel kwusịrị, ndị Charbelites kwenyere na onye ahụ na-emegide Kraịst, onye Kamm kpọrọ Maitreya, dị ndụ ugbu a, ọ ga-emesị na-eduzi otu ọchịchị ụwa nke otu na-akpagbu Ndị Kraịst. Usoro nkata nke eschatological, nke a na-ekwu na September 6, 1984, yiri ka ọ na-agbazinye ihe ndị Protestant na-ahụ maka fundamentalist (dịka rapture) na nkwenkwe apocalyptic Katọlik.
The Holy Holy Era nwere otu puku afọ nke na-eso oké mkpagbu nke Kamm, dị ka Pope ikpeazụ nke Chọọchị, ga-achị dịka onye ndú ime mmụọ na nke anụ ahụ site na Vatican ọhụrụ e guzobebere na ebe ọ nọ na Germany. N'ime oge a nke ogologo oge, Kamm, ya na ụmụ eze iri na abụọ na ụmụ-nwanyị iri abụọ na abụọ, ga-eme ka agbụrụ zuru oke n'ụzọ ime mmụọ site n'echiche ndị na-enweghị atụ. Dị ka ihe atụ, na otu ọhụụ site na 1993, Jizọs pụtara n'ihu Kamm wee sị:
Site na nkpuru gi, nwa m nwoke n'anya, na mmezu nke okwu m nye Abraham - ndi mba ohuru nile ga - abia - ndi obula asaa nke ga - achikota ala. Obodo iri asaa na abụọ ga-abụkwa otu ìgwè nke Paradaịs elu ala, nke gị onwe gị, nwatakịrị, ga-edu ma chịkwaa dị ka Vicar nke Kraịst; dị ka onye ndu nke ndị m site n'Achịeze Chineke. Ọ bụ site na mkpụrụ gị, nwa m hụrụ n'anya, na a ga-enwe ọtụtụ ijeri na ọtụtụ ijeri mkpụrụ obi nke a ga-eke tupu ọgwụgwụ nke ụwa. N'ime gị ka m na-eme ọgbụgba ndụ ikpeazụ na mmadụ, ruo ọgwụgwụ nke ụwa mgbe m ga-abịa ma kpee mmadụ ikpe. (Ozi 395 July 3, 1993).
Nke a ga-abata site na "Ihe Shiny dị nsọ," ngọzi nke mmụọ nyere Kamm na July 1993 ka o wee, dị ka Adam, Abraham na Moses, mụọ ọmụmụ ma mụbaa. Kamm mechara kwuo na nkwenkwe ndị a amalitebeghịrịrị na ọtụtụ n'ime ụmụ ya dị ọtụtụ site na ndị nwunye ime mmụọ ya dị iche iche tụụrụ ime n'enweghị mmekọahụ. Ndị Charbelites kwenyere na alaeze a ga-enwere onwe ya pụọ ​​na nmehie niile (ma e wezụga maka mmehie mbụ) na a gaghị enwe ihe mgbu, enweghị nhụjuanya na ọnwụ.
Iji nyere Kamm aka na New Holy Era ga-abụ ndị na-eso ụzọ ya, ndị a ga-enye onyinye dị iche iche ga-eme n'ọdịnihu. Na mgbakwunye na Kamm, ezigbo ndị na-eso ụzọ ya ga-etolite otu ndịozi nke ụbọchị ikpeazụ nke, na-esochi nghọta ha banyere amụma ụfọdụ dị na ọrụ nke St. Louis-Marie de Montfort ahụ e kwuru n'elu, ga-arụ ọrụ kachasị. N'oge dị iche iche, a gụọla ọnụ ọgụgụ dị iche iche n'etiti ndị a, gụnyere onye nduzi mmụọ mmụọ Kamm Bishop Malcolm Broussard, onye na-akpọkwa aha Little Bartholomew. Broussard kwuputara ihe omuma banyere ihe omuma akwukwo banyere ihe ndi ozo banyere okwukwe nke Charbelite banyere ihe ndi ozo nke Kamm na mgbaghara ogologo nke ezigara ndi na-eso uzo na 1996. O gosiputara ihe ndi otu a na-ahu dika okwu banyere akwukwo banyere Kamm di iche iche nke antinomian di iche site na isi Omume Katọlik.
Ụlọ ọrụ Charbelites na-agbanye mgbọrọgwụ na vatican II Europeanism devotional Catholicism. [Foto dị n'aka nri] Ọ na-agbapụta ihe dị ukwuu site na nkọwa ndị dị na akwụkwọ ndị Katọlik nke mbụ, dị ka Mary nke Agreda na Anne Katherine Emmerich, nakwa n'ekpere na ekpere dịgasị iche iche dị na Europe nke Europe nke na-emesi mkpuchi mmehie nke mmehie Kraịst ike site na iji anya nke uche na ntụgharị uche na agụụ na ọnwụ ya. Dịka ọmụmaatụ, òtù ahụ Akwụkwọ Ekpere Ụwa E nwere Chaplet dị nsọ na Ekpere iji kwanyere Ebube Onyenwe anyị ùgwù nke na-agụ:
Ohunanya Jisos, Nwa Aturu Chineke nke di ala, m onye nmehie na-ajuju, kelee ma kpoo ihe kachasi ike nke ubu gi nke i buru n'osisi okpu gi, nke mere ka aru gi buru aru ma mee ka obo gi bia ime ka ahuhu gi karia ihe obula ozo nke aru gi nke kachasi nma. M na-asọpụrụ gị, Jizọs Jizọs nke kachasị mwute; Ana m eto ma nye Gi otuto ma nye Gi ekele maka ihe a kachasi ihe di egwu na ihe ojoo, na-ario Gi site na oke ihe mgbu, na site na nkpagbu kpochapu nke oke kpoo gi iji meere m ebere, onye nmehie, gbaghara m nmehie m nile mmehie, ma duru m gaa n'elu igwe na ụzọ nke Cross gị. Amen. (OSC 1999: 13).
N'ihe banyere itinye uche na-emekarị, omume ndị Charbelites yiri ndị nke otu ndị Katọlik Katọlik ndị na-eme mgbanwe, na-emesi ike na na-ekpe ekpere rosary, novenas, ihe dị iche iche a na-edozi nsọ nye Virgin Mary, na ntinye obi nye obi nke Jisos na Meri, nke a na-egosipụta n'omume nke otu. Ọchịchị nke ekpere kwa ụbọchị bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ otu ndị ahụ ma na-agbaso onwe ha Ekpere nke uwa Book, nke n'eme ụtụtụ, n'ehihie, n'ehihie na nke mgbede, gụnyere rosary kwa ụbọchị.
Dika akwukwo ndi nchu aja nke Charbelite na ekwu otutu otutu ubochi, dika ma obu Novus Ordo Mwepụ nke Pope Paul VI ma ọ bụ Latin dịka 1962 Missal nke Pope John XXIII. [Foto dị n'aka nri] N'oge ọrụ ha, ndị Charbelites na-agbasi ike na nkwanye ùgwù kwesiri ka ha nabatara sacraments ahụ, a chọrọ ka ndị òtù na-enweta udo na ikpere ikpere na ire. N'otu aka ahụ, a na-asọpụrụ ma na-edozi ihe ndị a na-ahụ maka ụlọ chọọchị dị iche iche dị ka usoro iwu ndị dị na mbụ, na ebe obibi ahụ na-etinye ebe dị mkpa n'elu ebe ịchụàjà na ihe ndekọ nke ndị nsọ mara mma. Ndị Charbelites na-ekwusi ike na isi ndị inyom nọgidere na-ekpuchi n'oge Mass.
Na obodo, ndị Charbelites na-eme ememe Ụbọchị Mkpuchi mmehie n'ụbọchị nke iri na atọ n'ọnwa ọ bụla na Ebe Nsọ Camberwarra wee malite usoro mgbasa ozi, gụnyere ọtụtụ rosaries, uka, na ịnụrụ nkwupụta. [Foto dị n'aka nri] N'ihe gbasara 3 PM na Ụbọchị Mkpuchi Mmehie, Nwa Mịnyị Mary ga-apụta n'ihu Kamm na ndị ọhụụ ndị ọzọ na ụlọ nsọ ahụ ma kọọrọ ndị otu ozi ozi. O doro anya ma ọ bụrụ na ọdịnala a ka na-aga n'ihu ka nkwenye nzuzo nke Kamm gbochie ya ịga ileta mama na Cambewarra.
Nhazi, Saint Order nke Saint Charbel nwere ma ọ dịkarịa ala abụọ ụzọ abụọ nke otu. Usoro ahụ na-eme ka ihe dị iche n'etiti ọrụ ya dị ka ihe ọhụhụ na-akwado (1) nke okpukpe Roman Katọlik a na-anabata ma na-arụ ọrụ nke ime n'ime ya na (2) ọrụ pụrụ iche ma dị iche na nke "Chọọchị nke Catacombs" na ozi amụma nke obere Pebble. Maka ebumnuche nke ndị ọkà mmụta, Otú ọ dị, a ghaghị ilekọta ụlọ ọrụ abụọ a dị ka ihe dị ukwuu ma na-agụnye.
A na-achịkwa ndị òtù nke Order nke Saint Charbel site na Iwu na Constitutions nke Order nke Saint Charbel, nke e mechara chegharịrị na 1999 (ọ bụ ezie na nnukwu nyochaa na-echere dịka nke 2013), nke na-akọwa nhazi nke otu dị ka:
The Order of Saint Charbel na-achọ ime ka a maliteghachi izisa ozi ọma nke Chọọchị, iji nwetaghachi ezigbo omenala nke Chọọchị Mụrụ Nsọ, iji kwalite ịdị n'otu n'etiti Eastern Rites, na ịchọta akụkụ nke ndụ ndị mọnk ọdịbendị na ụdị ọhụrụ nke Consecrated Life (OSC 1996: 13).
Iwu ahụ na-achịkwa ndụ nke ọtụtụ ndị òtù nwere ike ịbanye n'otu alaka anọ. Alaka ụlọ ọrụ nke mbụ bụ nke ndị ụkọchukwu na-agba alụkwaghịm; nke abụọ nke okpukpe (ma nwoke ma nwanyị); na alaka nke ato nke mejuputara nke ndi mmadu, onye obula n'ime ha bi n'ime obodo. Ngalaba nke anọ, ndị otu a tụnyere "iwu nke atọ" dị na ndị ọzọ Katọlik (dịka ndị Carmel), gụnyere ndị nkịtị na-adịghị ebi n'obodo, mana ndị na-agbaso ekpere ekpere kwa ụbọchị nke ndị bi n'ógbè. N'ikpeazụ, ndị nnọchianya nke òtù ụka, bụ nke gụnyere ụlọ ekpere nke Saint Charbel, Udo, Ịdị n'otu na Ndozi (otu ekpere ekpere nke otu agbasasị na-efegharị n'ụwa, ma karịsịa ọtụtụ n'Africa na India) na The Living Stones (ndị nwere ike, maka iche iche ihe kpatara ya, ghara itinye aka n'ime ihe ndị ọzọ). Mgbe ọ dị elu, ọnụọgụgụ nke ndị na-enweghị okwukwe na-agụnye ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ puku mmadụ, ma eleghị anya karịa, ebe ndị nọ na alaka anọ ọzọ dị ntakịrị ma bụrụ ndị na-ejedebere na ọnụ ọgụgụ dị nta n'Australia na ná mba ọzọ.
Site na Iwu ahụ, ndị Charbelites na-achọ irube isi na charism ma nye iwu ka a na-agbaso okpukpe ndị Roman Katọlik dịka ndị Franciscans ma ọ bụ ndị Dominicans, na iwu na ụkpụrụ dị iche iche dị iche iche dịka ịbanye, akwụkwọ ozi, akwụkwọ nchịkwa, ọrụ, ndụ obodo, ekpere, ezinụlọ na mmekọrịta mmadụ na ibe, na ọrụ ndịozi. Iwu ahụ na-esetịpụ ụkpụrụ nduzi iji guzobe seminarị na ọzụzụ nke ndị ụkọchukwu ọ bụ ezie na nke a enwebeghịrị mkpụrụ osisi.
Otú ọ dị, na mgbakwunye na nsụgharị dị n'elu bụ ịdị adị nke ihe a na-ezokarị na ozi dịka "gburugburu obi," nke gụnyere ụmụazụ kachasịnụ Kamm. Ndị nọ n'ime ime na-ekwe nkwa ịgbachi nkịtị, nke na-egbochi ha ikwu okwu banyere itinye aka na arịrịọ nke Nwaanyị Mary. Na mbụ, ọrụ ime mmụọ dị n'ime ime bụ iji hụ na "Chọọchị ahụ zoro ezo" dịgide ruo mgbe nlọghachi nke Jizọs Kraịst. Nke a yiri ka ọ gbanweela oge, ọ ga - abụkwa na ugbu a, n'ime ime ụlọ a ka ọ kwadoro ozi obere obere Pebble.
Na mgbakwunye na akụkụ ndị a, abụwo ihe a na-akpọ "ndị agha nke St Michael" nke, ebe ọ bụ na nkọwa dị ntakịrị, pụtara na ha bụ ndị isi nke obodo Charbelite bụ ndị natara ụdị nke ọzụzụ nchịkwa / survivalist na Njirimara nke otu. Ndị otu Kamm, James Duffy, bụ ndị kwuru na ha na-eduzi otu ìgwè a na-eduzi ụdị ọzụzụ dị iche iche na Nowra na n'ebe ndị ọzọ, na-ede otu akwụkwọ a kpọrọ Ntuziaka ndu na nchedo Marian.
Ọ bụ ezie na Iwu ahụ na-achọ iji mesie ike na Onyeisi Elu nke Ụkpụrụ bụ Onye Nnọchiteanya nke Kraịst, usoro nduzi nke ndị Charbelites nọgidere na-edozi nke ọma, dịka ebe ndị ụkọchukwu a lụrụ di na nwunye, nke iwu ahụ na-atụ anya n'ọdịnihu. Broussard, bụ onye kwadoro ma dozie ọnụ ọgụgụ buru oke ibu nke ndị nwoke, lụrụ di ma ọ bụ nwunye. N'ikwu eziokwu, Kamm na-achịkwa "chọọchị ndị mọnk," na ndịozi ya na njedebe oge ụfọdụ ka a na-ewere na ha na-eme ihe yiri nke ahụ na Ụlọ Akwụkwọ Apostolic (ya bụ, ndị bishọp na ndị Cardinals dị n'okpuru Pope).
Ndị Carbelites enweela ọtụtụ ihe ịma aka n'ọtụtụ ihu. Nkwenye ndị omempụ Kamm bụ nke kachasị emetụta, ma enwekwara esemokwu na obodo dị na Cambewarra, mgbasa ozi na-adịghị mma, ndị na-akatọ ndị mbụ, mmegide siri ike site n'aka ndị isi Katọlik, na ịbelata ndị otu.
Ozi Kamm nke gbasara oge nsọ Ọhụụ na nke Broussard na-agbachitere ndị a (tụlere n'elu) enwewo mmetụta dị ukwuu n'arụ ọrụ ndị ahụ ma gosipụta oke arụmụka gbara gburugburu Charbelites ma na mmekọrịta ya na Chọọchị Roman Katọlik na na ụlọikpe Australia. N'ọgbakọ ụka, a na-atụle ihe ọmụmụ Charbelites na ozizi ndị ọzọ - na - eso ọtụtụ nchọpụta ruo ọtụtụ afọ - ka Chọọchị na-ekwu okwu ntụgharị, otu ihe doro anya na iwu nke Bishop Peter Ingham (Ingham 2002) kwuru. Otú ọ dị, arụmụka gbara gburugburu ìgwè eschatology ahụ ka a na-akpọkwu na ogige iwu dịka ọ bụ nkwenkwe ndị a kpọmkwem na mmejuputa ha n'ime obodo ndị na-adabere n'ọnọdụ ikpe megide Kamm. N'okwu ndị a, ndị ọkàiwu ahụ kwuru nke ọma na ọ bụ "dị ka ụlọ ọrụ ndị a si dị, ọ [Kamm] batara ma kpochapụ ọtụtụ ụmụ nwanyị si n'etiti ndị òtù cults" (Yeomans 2013, P. 44). N'ikpe ikpe Kamm, Ikpe ziri ezi David Berman kwuru na:
Achọpụtara m na mmejọ ahụ bụ akụkụ nke ọrụ omempụ a tụrụ anya ya. N'ezie, onye na-eme ihe ọjọọ modus operandi bụ ịchụso onye mkpesa ahụ na nne na nna ya site na iji nkwurịta okwu akpọrọ ihe na Virgin Mary, ime ka ha mee ihe ha ga-eme n'ụzọ doro anya na ha agaghị eme ya ọzọ. Onye omebiri ahụ wepụtara iji nweta ihe inwe mmekọahụ na nwa agbọghọ na-adịghị mma ma jiri nkwenkwe okpukpe ya mezuo ya. (R na William Kamm )
A kwadoro nkwenkwe ndị a n'agbanyeghị ọtụtụ arịrịọ, ebe ọ bụ na nkwụpụ ya Kamm ekwuola na eluigwe ejirila ihe ndị a nke nkwenkwe nke ụlọ ahụ kwụsịrị, ọ na-egosikwa na ya adịghị ọcha. E wezụga nkwenye ndị omempụ nke Kamm na ikpe ikpe na-aga n'ihu na nke a na ihe ndị ọzọ, ndị Charbelites echekwara ọtụtụ ihe ịma aka n'ọtụtụ n'ihu.
Na mpaghara mpaghara na-amalite site nchịkọta mbụ nke ndị na-eso ụzọ n'oge 1980s, ndị Charbelites abụrụ isiokwu nke esemokwu na obodo dị na Cambewarra. Otu ihe merenụ mere mgbe ìgwè ahụ na-ewu catacombs ya na mmalite 1980s. Dị ka akụkọ mgbasa ozi n'oge ahụ, iwu ahụ wuru ogige ndị njem na-eme njem site na azụmahịa (nke Charbelites zụrụ ala ahụ). N'ime oge ahụ, mmiri mmiri dị nsọ nke ìgwè ahụ na-arụ ụka mgbe mmiri nyochachara mmiri gosiri na ọ ga-emerụ ya ma ghara ịdị ize ndụ maka oriri mmadụ, ikekwe site na nsị. Ọrụ ndị ahụ nọgidere na-abụ isi akụkọ nke mgbasa ozi mpaghara na 1980s na 1990s. Mgbasa ozi mgbasa ozi na-ezighi ezi nọgidere na-emetụta otu ìgwè dị na mpaghara, ebe a na-agbaso telivishọn telivishọn akụkọ mgbasa ozi site na mmejọ na egwu egwu nke oge ụfọdụ megide ndị òtù nke otu ìgwè na Cambewarra. N'oge a, ìgwè ahụ, n'okpuru nduzi nke Bishop Broussard, na-achọ ibi ndụ dị jụụ ma gbalịsie mbọ ike ka ha ghara ịkpasu ndị agbata obi ha iwe ma ọ bụ mee ka ọgba aghara ma ọ bụ mkparị ọ bụla na mgbakọ ụka.
Kemgbe 1980s, ndị Charbelites abụwo isiokwu nke mgbasa ozi mgbasa ozi dị ukwuu na Australia, ma na akwụkwọ mpaghara na nke mba. Tupu njide Kamm, mkpuchi a na-abụkarị obere ihe nchikọta nke ịkpa ọchị na ịkwa emo, nke mere na otu a kpalitere usoro iwu na-enweghị isi megide ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ọtụtụ oge. N'ihe banyere ụda nke mkpuchi a, n'oge mmalite 1980s a na-akpọ ndị otu ahụ dị ka ndị Roman Katọlik ma bụrụ ndị a hụrụ dị ka ọchịchọ ịmata ihe obodo (ma mesịa kọwaa ya dị ka "ịrọ òtù" Katọlik) nke esemokwu ya na Rome ka a na-emeso mgbe ụfọdụ ọbụna na ọmịiko. Otú ọ dị, ka oge na-aga, asụsụ e ji mee ihe ghọrọ ihe na-akpali akpali karị, a na-akpọwanye ìgwè ahụ dị ka "òtù nzuzo" ma ọ bụ "òtù ụbọchị ikpe" ma bụrụ ndị e gosipụtara n'ụzọ aghụghọ na nke aghụghọ. Onye bụbu onye nta akụkọ Australian Associated Press Graeme Webber bipụtara onwe ya nke ọma na nyocha nke ọma ogologo oge maka ịkọ akụkọ nke otu ahụ na 2008.
Ikekwe onye a ma ama bụ usoro akụkọ na 1997 na-ekwu na ìgwè ahụ nwere ike ịme atụmatụ igbu onwe (dịka nke ọnụ ọgụgụ ámá Heaven's Gate) mgbe Kamm kwusịrị nkwekọrịta n'etiti Comet na Sun na Sun nke ga-emepụta cataclysms. Akuko ọzọ, a kwadoro 60 Nkeji na 1997, na-achọ ịchụ ndị Charbelites dịka "egwu nzuzo" na-ekwu banyere ịzụ ọzụzụ agha na-ewere ọnọdụ na njirimara ha. O doro anya na ndị Charbelites nwetara ụfọdụ ọrụ agha na-eme n'oge dịgasị iche iche nke akụkọ ihe mere eme ha, ma ndị uweojii ekwughị ihe ndị òtù mbụ na-ekwu banyere nnukwu ngwá agha, ọ bụ ezie na e jidere égbè ụfọdụ e debara aha na 2002. Otú ọ dị, ọ dịkarịa ala, otu onye na-ekwu na ọ bụrụ na ọ bụ na Kamm kwadoro, ọ na-ekwu na ọ na-ekwu na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi na-adị na nzuzo. N'oge 1990s, ASIA na-ahụ maka ụlọ ọrụ ọgụgụ isi nke Australia nwere mmasị na Charbelites, ndị uweojii weere nlezianya dị ukwuu mgbe ha na-awakpo obodo na 2003. Kamm na-aga n'ihu na-ele mgbasa ozi anya na nkwenye ndị omempụ ya na asọmpi na-eme ka obi ghara ịdị ọcha. N'ime oge ndị na-adịbeghị anya, ọ malitela ikwu okwu banyere "akụkọ na-adịghị mma" na-ekwu banyere usoro mgbasa ozi na-agwọ ya.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọtụtụ ndị ahapụla Charbelites mgbe nile na-ekwurịta okwu banyere ndị otu. Ndị gara aga bụ ndị na-edegara ndị bishọp dị iche iche nke Katọlik akwụkwọ banyere ọrụ nke ìgwè ahụ, ọtụtụ ndị bishọp nọ n'Australia emeela nkwupụta banyere ìgwè ahụ ruo ọtụtụ afọ. Nke a na - agụnye Achịbishọp (nke bụ Kadinal) George Pell onye dọrọ ndị ụkọchukwu aka na Archdiocese nke Melbourne na 1997 megide ìgwè. Na 2014, Bishop Antoine-Charbel Tarabay (Bishop nke Maronite Eparchy nke Australia) kwupụtara nkwupụta ọha na eze banyere nchegbu ndị obodo Maronite banyere okwu parole Kamm na ịkọwa ọnọdụ ya na-ezo aka na Chọọchị, na-arịba ama:
William Kamm na ihe a na-akpọ "Order nke St Charbel" enweghị njikọ ọ bụla na Chọọchị Katọlik nke Maronite. E kpochapụrụ ya na Chọọchị Katọlik na 10 June 2003, n'ihi ya, ọ gaghị enweta sacraments ọ bụla nke Chọọchị, ma ọ bụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ọ bụla n'ime Chọọchị. Ndị Katọlik Maronite na Chọọchị Roman Katọlik na-ajụ ozizi ya na ije ya. (Tarabay 2014).
N'agbanyeghị na ndị bishọp dị n'ógbè a na-emegidekarị n'Australia, ndị Charbelites anọgidewo na-arịọ ndị bishọp nọpụrụ n'Australia ma ọ bụ ndị Datasteries dị iche iche dị na Vatikan iji gbadoro ọrụ ha ma ọ bụ ịhazi ọnọdụ ha. Otú ọ dị, atụmatụ aghụghọ a apụtaghị ihe ịga nke ọma. Ihe a kacha mara ama bụ mgbe Cardinal Jaime Sin nke Philippines kwadoro nkwado ọ nyere ụlọ ekpere nke Saint Charbel mgbe ọ matara banyere nsogbu ndị Charbelites na bishọp obodo ha. N'izo aka n'inweta uzo di iche iche na Vatican dicasteries, o yikariri ka ekwenyeghi oge na ihe ndi ozo nke Rom ga - aza ndi choro Charbelite ma obu na azịza ga - enwe nkwado. N'ezie, ọtụtụ ndị na-enweghị ike ịzaghachi azịza dịka ihe ọjọọ. Ọgbakọ maka ozizi nke Okwukwe kwadoro akara nke ndị bishọp obodo na-eme megide Charbelites kemgbe 1984. Ha na-agbakwa ume ma mesịa kwado ihe omume Nchọpụta Diocesan nke Bishop (ugbu a bụ Achịbishọp) Philip Wilson na iwu 1999 na iwu abụọ nke Bishop Peter Ingham nyere. Ọzọkwa, mkpebi nke Charbelite na 2003 iji mee ka Broussard bụrụ onye e doro nsọ na Thuc Line emeela ka ọnọdụ sie ike, na-eduga na de facto ihe mgbapụta na-ezighi ezi megide ndị fọdụrụ.
O yikarịrị ka ndị Charbelites, bụ ndị ọnụ ọgụgụ ha nọ na-ebelata ebe ọ bụ na tupu ụlọ mkpọrọ Kamm, adalata na njedebe. E nwere akụkọ na ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị bụbu ndị òtù na-alọghachiri na Roman Catholic Church ma ọ bụ na ha na òtù ndị ọzọ yiri ya. Ego, akụkọ mgbasa ozi na-adịbeghị anya na Australia na-ekwu na, n'ihi mkpesa nke na-aga n'ihu na nkwado nkwụsị, a manyere ìgwè ahụ ka ha tinye Ebe Nsọ ya maka ire ere. Ma, Kamm nọgidere na-enweta ozi site na Virgin Mary na mgbe niile ma nye ndụmọdụ ndị a na-enyeghị ndụmọdụ maka ndị ndú ụwa dị iche iche, bụ ndị na-adịbeghị anya na US President Donald Trump, na otu ahụ ka na-ejide otu ìgwè nke ndị na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi n'Australia na agbasapụ n'Ịntanet na-esote mba ụwa.
Foto #1: William Kamm Ịnata ozi na 1988.
Foto #2: Akwụkwọ ihu akwukwo Yves Dupont n'ihu, CatholicProphecy.
Image #3: Ndị njem ala n'oge ezumike na-ezukọta.
Image #4: Bishop William Murray nke Diocese nke Wollongong.
Foto #5: William Kamm ka e sere ya na Pope na Rom.
Image #6: Ọnụ ụzọ ámá dị na Community nke Gethsemane na Cambewarra.
Foto #7: William Kamm na-eguzo na onye ọka iwu ya.
Image #8: Charbelites na ekpere.
Foto #9: Ụlọ ọrụ nke Ụlọ Nsọ Saint Charbel.
Foto #10: Onye njem pilgrim nke Charbelite na Ụbọchị Mkpuchi Mmehie.
Boreham, Susan na Maiolo, Rosa. 1993. "Onye Amụma na Ọla." Sydney Morning Herald, Egwuregwu Ọhụụ, December 24, p. 1.
Bromley, David G. na Rachel Bobbitt. 2011. "Nhazi Ịhazi Ọganihu Marian Apparitional movements." Nova Religio 14: 5-41.
Broussard, M. 1996. Ozi Nke 512: Otu ntụziaka nye ndịozi niile, ndị na-eso ụzọ, ndị na-ahụ maka ihe omimi, ndị na-ahụ anya, ndị isi nwa na ndị nke Chineke, March 19. Ugbu a: Onye edemede.
Cuneo, Michael. 1991. Anwụrụ ọkụ nke Setan: Ọchịchị na omenala na-esonye na Contemporary American Catholicism. New York: Oxford University Press.
Doherty, Bernard. 2017. "Marian Arks Cut Cutting: Mgbasa Ozi Katọlik nke Post-Roman Katọlik nke Marian Appraitional Movements." Pp. 98-121 na Mkpụrụ Ọgwụ na mmalite nke Narị Afọ Iri Atọ, nke K. Wagner, MI Naumann, PJ McGregor na P. Morrisey dere. Eugene, Oregon: Pickwick Publications.
Doherty, Bernard. 2015. "Na-eti Ọnwụ nke Okwukwe Anyị Ọnwụ: obere obere ube na ọrụ mgbapụta nke Marian 1950-1984." Akwụkwọ akụkọ nke Australian Catholic Historical Society 36: 231-73.
Doherty, Bernard. 2014. "Ụzọ nke Schism: Yves Dupont na Latin Mass Society nke Australia 1966-1977." Akwụkwọ akụkọ nke Australian Catholic Historical Society 35: 87-107.
Kwalite, Michael Smith 1995. "Echiche Ndị Na-eme Ka A Na-eche Banyere Ọdịnihu." Ọmụmụ Marian 46: 128-44.
Hartney, Christopher. 2016. "Ndị Katọlik Katọlik Karịa Popu: Ọrụ Katọlik nke William Kamm, na Nwelite nke Order Saint Charbel." Mgbanwe Ime Mmụọ na Okpukpe 7: 279-93.
Isi ihe sitere na Ozi sitere na Heaven nyere Little Pebble, Book 1, 1983-1986. 1990. Ugbu a: Ọrụ Mmehie nke Marian.
Isi ihe sitere na Ozi sitere na Heaven nyere Little Pebble, Book 2, 1983-1986. 1990. Ugbu a: Ọrụ Mmehie nke Marian.
Isi ihe sitere na Ozi sitere na Heaven nyere Little Pebble, Book 3, 1987-1988. 1991. Ugbu a: Ọrụ Mmehie nke Marian.
Isi ihe sitere na Ozi sitere na Heaven nyere Little Pebble, Book 4, 1988. 1991. Ugbu a: Ọrụ Mmehie nke Marian.
Isi ihe sitere na Ozi sitere na Heaven nyere Little Pebble, Book 5, 1988-1989. 1991. Ugbu a: Ọrụ Mmehie nke Marian.
Isi ihe sitere na Ozi sitere na Heaven nyere Little Pebble, Book 6, 1987-1990. 1992. Ugbu a: Ọrụ Mmehie nke Marian.
Isi ihe sitere na Ozi sitere na Heaven nyere Little Pebble, Book 7, 1990-1992. 1992. Ugbu a: Ọrụ Mmehie nke Marian.
Isi ihe sitere na Ozi sitere na Heaven nyere Little Pebble, Book 8, 1992-1993. 1993. Ugbu a: Ọrụ Mmehie nke Marian.
Hitti, Joseph. 1995. Akwụkwọ Ozi Nye Ndị Diocese nke St Maroun n'Australia, July 24. Sydney.
Ingham, Peter. 2002. Dee: Mr William Kamm marakwa dị ka Little Pebble, June 16. Diocese nke Wollongong.
Introvigne, Massimo. 2011. "Millennialism Katọlik nke oge a." Pp. 549-66 na Akwụkwọ Oxford nke Millennialism, nke Catherine Wessinger dere. Oxford: Oxford University Press.
Jelii, Frederick M. 1993. "Ịghọta Ọrụ Ebube: Ụkpụrụ maka ikpe ikpe na nkwupụta nzuzo." Ọmụmụ Marian 44: 41-55.
Kamm, William. 2002. Agba na Mystical Life nke William Kamm, Mpịakọta 3. Ugbu a: Onye edemede.
Kamm, William. 2000. Agba na Mystical Life nke William Kamm, Mpịakọta 2. Ugbu a: Onye edemede.
Kamm, William. 1999. Agba na Mystical Life nke William Kamm, Mpịakọta 1. Ugbu a: Onye edemede.
Laycock, Joseph. 2015. Onye na-ahụ maka Bayside: Veronica Lueken na Mgbalị Ịkọwapụta Katọlik. New York: Oxford University Press.
Laurentin, Rene. 1991. Nkwupụta nke Nwanyị a Na-agọzi Taa. Dublin: Akwụkwọ Veritas.
Laurentin, Rene. na Sbalchiero, Patrick, eds. 2007. Dictionnaire des «apparitions» de la Vierge Marie. Paris, France: Fayard.
Luebbers, Amy. 2001. "Ndị Na-atụgharị Obi: Ihe Omume nke Akwụkwọ Nsọ Katọlik Apocalyptic nke Akwukwo Igbo. Sociology nke Okpukpe 62: 221-41.
Matter, E. Ann. 2001. "Nkọwa nke Virgin Mary na njedebe nke iri abụọ na narị afọ: Apocalyptic, Representation, Politics." Religion 31: 125-53.
Margry, Peter Jan. 2004. "Global Network of Divergent Marian Devotion." Pp. 98-102 na Encyclopedia nke New Religions, nke Christopher Partridge dere. Oxford: odum.
Murray, William. 1984. Na Ezi Nkwupụta Nye Mary Mary Ngọzi. Pastoral Letter,, December 2. Diocese nke Wollongong.
Iwu nke Saint Charbel. 1999. Akwụkwọ Ekpere Ụwa. Ugbu a: Order of Saint Charbel.
Iwu nke Saint Charbel. 1996. Iwu na Iwu nke Order Saint Charbel: Ụlọ Ahịa Australia. Ugbu a: Order of Saint Charbel.
Pell, George. 1997. Nkwupụta ọkwa, June 13. Archdiocese nke Melbourne.
R na William Kamm. 2007. NSWDC 177
Tarabay, Bishop Antonine-Charbel. 2014. William Kamm aka "obere obere ube." Mgbasa mgbasa ozi, November 14. Maronite Eparchy nke Australia.
Webber, Graeme. 2008. A Wolf n'etiti umu ehi: Otu "Onye amuma nke Chineke" obere obere ugwo wee ghọọ onye nduzi nduzi nke otu nde. Tomerong: Keystone Press.
Wickham, Shelley na Christopher Hartney. 2006. "Ntucha na obere obere ube: Uche, Fringe na Criminal." Pp. 288-301 na Site na Glass Darkly: Echiche banyere Ihe Nsọ, nke Frances Di Lauro deziri. Sydney: Mahadum Sydney Pịa.
Wilson, Philip. 1999. Debe, September 27. Diocese nke Wollongong.
Pita, Peter. 2013. "'Ntakịrị Pebble' Onye Nduzi Ndị Ntorobịa na Mmekọahụ Mmekọahụ Ụmụaka." Akwụkwọ akụkọ uweojii nke Australian 67: 44-49.
Zimdars-Swartz, Sandra L. 1991. Na-ezute Mary: Site na La Salette ruo Medjugorje. Princeton: Princeton University Press.